နွေရာသီ 90-120cm Eco-Friendly ရှူရှိုက်နိုင်သော Reversible Baby Girl Swimwear |
နွေရာသီ 90-120cm Eco-Friendly ရှူရှိုက်နိုင်သော Reversible Baby Girl Swimwear
ပစ္စည်း polyester / spandex
နည်းပညာ လျင်မြန်သော-ခြောက်သွေ့သော၊ တင်းတင်းကျပ်ကျပ်၊ နွေးထွေးမှုရှိရန်၊
အသွင်အပြင်: အစိုဓာတ်ကိုထိန်းနိုင်သော, အသက်ရှူနိုင်သော, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်
အလေးချိန်: 200 ဂရမ်
ဒီဇိုင်း: OEM / OEM ဝန်ဆောင်မှု
ကွဲပြားသောအမျိုးအစားများကိုအမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးတွေဝတ်ဆင်နိုင်သည်။ ရေကူးဝတ်စုံတစ်မျိုးအားနာမည်အမျိုးမျိုးဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။ အချို့သောနေရာများတွင်ရေကူး ၀ တ်စုံများ၊ ရေကူးဝတ်စုံ ၀ တ်စုံ၊ အပိုင်းအစနှစ်ခု၊ အဖုကင်းစောင့်တပ်၊ ဘုတ်အဖွဲ့၊ ကမ်းခြေဘောင်းဘီတို၊ အပြိုင်အဆိုင်ရေကူးခြင်း၊ အခြားသူများ။
ပိုပြီးလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်ခြေထောက်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြင့်ချိန်ညှိပခုံးကြိုးရေကူး ၀ တ်စုံ
လျင်မြန်သော - ခြောက်သွေ့သော၊
တောက်ပသောအရောင်နှင့်ချစ်စရာကောင်းသောဒီဇိုင်းနှင့်အတူမိန်းကလေး ၀ တ်စုံရေချိုးထားသည်
ဒါကရုပ်ပုံမှာလူလိုပဲချစ်စရာကောင်းတယ်! အကြှနျုပျ၏3နှစ်ဟောင်းဒီဇိုင်းကိုခစျြ! အခြားသူများသိသည့်အတိုင်းအရွယ်အစား4သည်အမှန်တကယ် ၃-၄၊ ၅ က ၄ မှ ၅ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ပိုကြီးလိုလျှင်4သည်အရွယ်အစား ၅ သို့သွားပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏သမီးနှင့်ကိုက်ညီသော်လည်း ၄ င်းကိုပိုမိုအသုံးပြုရန် ၄ သည်ကြီးမားလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သမီးကသူမအသက် ၄ နှစ်အရွယ် ၅ နှစ်မှ ၆ နှစ်အထိရရှိသောရေကူးဝတ်စုံကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်
ရှေ့သို့ လျင်မြန်သောခြောက်သွေ့သော Breathable Nontoxic အမျိုးသမီးများအတွက် ၂-၁၂ နှစ်ကလေးများအတွက်ရေချိုးခြင်းဆိုင်ရာဝတ်စုံများ
နောက်တစ်ခု: Two Pieces ငယ်ရွယ်သောမိန်းကလေး Bikini သည်အသက် ၂ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အကြားရှိရေကူးဝတ်စုံကိုသတ်မှတ်သည်